Ukuthwebula amavidiyo, akubona bonke ukucabanga nendlela lokubeka idivaysi, ngakho uma ukubuka "Dala wobuciko" ebuza indlela ukuze ujike ividiyo. Ngemifanekiso yonke into icacile: ukuze sandise isithombe, kwanele ukuba sisebenzise uhlelo standard Windows, isibonelo, Media Player. Leli thuluzi likuvumela ukushintshanisa yesithombe 90 ° 360 °, lapho ukujikeleza kungenzeka ngo-90 °, 180 °, 270 ° kanye 360 °, isb ezine ongakhetha, kodwa kwanele, nakuba ezinye inhlanganisela ukuvula azisetshenziswa .
Windows Media Player ilondoloza isithombe kulesi sikhundla ngokuzenzakalela uma ushintshela esinye isithombe - usebenzisa okhiye ezikhethekile isofthiwe.
Kodwa ilungiselelo isithombe static, chaza ukuthi siyixazulule ilula, futhi kanjani ukuze ujike ividiyo? Lo mbuzo uhlupha Abasebenzisi abaningi ongenalwazi. Ukuze ukushintshanisa isiqophi, kubalulekile ukusebenzisa isimiso esikhethekile, engesiyo ingxenye Izinsiza ejwayelekile. Eziningi zalezi zinhlelo, ihlala yodwa ukuba ukhethe lowo ngendlela esilindele yakho.
ngezidingo ezifana zidalwe ikakhulukazi ukuze lokuxhaphaza indawo isiqophi esikhaleni ezibukwayo. Kaningi lapho kokufaka amavidyo ochwepheshe ibhekene nesidingo ukushintsha ezinye izingxenye, engeza imiphumela noma wandise indawo wokubuka. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa amathuluzi anjenge Mahhala Isiqophi Flip futhi Zungezisa noma VirtualDub - uhlelo eziphambili kakhulu futhi ethandwa Nokho, non-professional, ukuze, ngaphezu, indlela ukuze ujike ividiyo, lokhu yini isofthiwe ingasakwazi.
Kodwa abasebenzisi abavamile kungadingeki lutho olunye. Ngosizo la mathuluzi ongaxazulula inkinga eyisisekelo. Ngeshwa, Mahhala Isiqophi Flip futhi Zungezisa ngempela komphangayo ividiyo, okungukuthi, izinga layo liwohloka. Ngakho-ke, usebenzisa lo mhleli, kufanele uqaphele. Umsebenzi Umbuso indawo Kunconywa nge kwekhwalithi ephezulu yevidiyo ukuze Ukuwohloka sasingeyona okuqaphelekayo, futhi esimisweni yayinesihloko kancane. Uma isikhathi kuyabiza futhi ikhwalithi amavidyo, ungathenga isofthiwe ikhokhwe - ithuluzi ezikhethekile ukuthi bangasebenza yimuphi izakhiwo ifayela, futhi ukusebenza wenziwa ngokushesha ngaphandle izinga imihlatshelo.
Ngaphambi ukushintshanisa kwevidiyo, ufanele uzinqumela ukuthi amathuluzi ukuyisebenzisa. Ukuthenga isofthiwe ikhokhwe ziyokuwa imali eningi, kodwa uma ukwenza ukufakwa efanele ke kuyakufanelekela it ngoba imali Umbuso indawo kuyokwenza ukukhokhela ngokwayo kunalokho ngokushesha, futhi amakhasimende ngokuqinisekile yaneliswa izinga umsebenzi owawenziwa.
Nokho, uma ufuna ukushintshanisa isiqophi-90 degrees, ngoba omunye ukhohlwe indlela ube ikhamera, kwanele ukuze uthole omunye Izinsiza khulula. Ngokwesibonelo, VirtualDub - kuyindlela olukhulu kubasebenzisi abavamile, ithuluzi inikeza ezinhle ukucutshungulwa izinga.
Uma ufuna ukujikisa isithombe ngesikhathi sokudlala, kungenzeka nganoma iyiphi hlelo cishe yesimanje isiqophi wokubuka. Ngisho i-Flash Player egijima kwimodi online, baye umsebenzi njengoba Media Player Classic ithuluzi ethandwa ikuvumela ukushintshanisa yesithombe 45 °.
Ngakho, i-Internet ikunikeza ulwazi oluningi futhi izindlela zokuxazulula izinkinga, kubalulekile kuphela ukwazi ukuthi uwasebenzise.
Ekilasini Abstract futhi indlela: incazelo, izici kanye nezici. Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini abstract ekilasini esibonakalayo
Ongakhetha Amaholo ukunciphisa - kungaba yangempela?